अमेरिका त्यागेका खड्का भन्छन् ,म दोलखाको समृद्धि चाहाँन्छु - सेतो गुरास
सेतोगुराँस Tuesday, November 7, 2017
नेपाली कांग्रेस दोलखाले प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्धार बनाएको हालका सभापति समेत रहेका रुद्रबहादुर खड्का करिब १० बर्ष अमेरिका बसाई पछि पुन नेपाल फर्किए । थोरै मानिस अमेरीकाको सुखसयल बसाई त्यागेर नेपाल फर्कन्छन् । तिनै खड्काले दोलखाको समृद्धिको सपना देखेर अमेरीकाको बसाईलाई त्यागेर फर्किए । सानै उमेरमा सफल राजनितिज्ञको रुपमा चिनिएका खड्का ३२ बर्षको उमेरमा निर्बाचित जिल्ला बिकास समितिको सभापति बने । खड्काले जिल्ला बिकास समितिको सभापति हुँदा दोलखाको समृद्धिका लागि थुप्रै बिकासे योजनाको थालनी र खाका तयार पारे । तिनै खड्का जसले जिबिस सभापति बनेर बिकसीत दोलखा र समृद्ध दोलखाका लागि निकै महत्वपुर्ण कार्य गरे । राजनितिकै कारण घरयासी आर्थिक अबस्था दयनिय भएसँगै जिल्लाका जनतासँगको माया सद्भाब हुँदा हुँदै पनि आफु नेपाल छोडेर केहि समय अमेरिका(परदेश) बसेपनि आफुले देखेको समृद्ध दोलखाका सपना पुरा गर्न २०६३ सालमा अमेरीकाबाट फर्केको उनि बताउछन् । यसै सन्दर्भमा आगामी निर्बाचनका बारे नेपाली कांग्रेस दोलखाका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्धार रुद्रबहादुर खड्कासँग सेतोगुराँस अनलाईनका सम्पादक गोकर्णप्रसाद भण्डारीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ः
बामपन्थिगठबन्धनको अगाडी तपाई चुनाब जित्नुहुन्छ ?
म निर्बाचन जित्छु । बामपन्थि सँग चुनाब भन्दा पनि एउटा सिष्टमसँग म निर्बाचन लडिरहेको छु । यो देशले बामपन्थि स्वीकार्न सक्दैन । मुलुक लोकतान्त्रिक समाजबाद तर्फ उन्मुख भईसक्यो । साम्यबाद जनताले रुचाउँदैनन् । म मात्रै हैन दोलखाका हाम्रा प्रदेश सभाका दुबै उम्मेद्धारहरुले पनि निर्बाचन जित्नु हुन्छ ।
तपाईले जिल्ला बिकास समितिको सभापति हँुदा दोलखाको बिकासका लागि के के गर्नु भयो ?
मैले दोलखाको समृद्धिका लागि थुप्रै कार्य गरेको छु । मैले धेरै कुरा भन्दा सबैलाई पत्यार नलाग्ला तर त्यो बेलाको पुस्ता र अन्य राजनितिक कर्मीलाई सोध्नुस्, रुद्र खड्काको भिजन केथ्यो र के ग¥यो भनेर । आज सायद दोलखाका मानिसले तुईन भन्ने के हो कसैलाई थाहा छैन, त्यो तुईनको कठिन यात्रालाई अन्त्य गरि सबै नदि र खोलाहरुमा मैले पुल बनाएको छु । त्यो मेरो पालामा र मैले तुईन मुक्त दोलखा बनाएको हुँ , त्यो समयमा ९० मिटर भन्दा लामो पुल समेत बनाउन नपाईने सरकारी नियम थियो ,मैले त्यो नियम परिबर्तन गराएर १ महिनामा लाामा लामा पुलहरु निर्माण गरेका थुप्रै उदारणहरु छन् । सो समयमा दोलखामा ६३ वटा झोलुङ्गे पुल बनेका छन् । मैले त्यो बेला उच्चमाबि शिक्षा सञ्चालनमा ल्याएको हुँ त्यसको उदारण हो जिरी उच्च माबि दोलखाको पहिलो उच्च माबिको रुपमा मैले नै बिकास गरेको हुँ । दोलखाका सबै गाउँमा स्वास्थ्य चौकीहरु स्थापना गरेको छु, प्रत्येक स्थानमा स्कुल खुलाएको थिएँ । थुप्रै भौतिक संरचनाहरुको स्थापना गरेको छु । २०४५ सालको भुकम्प पछाडीका पुननिर्माण मैरै पालामा भएको हो । त्यसबेलाको नष्ट बिद्यालयहरुका भबनहरु, पर्यटकिय स्थानको अध्ययन र गरुुयोजना तयारपारी केन्द्रिय बजेट हाल्ने सुरुवात समेत गरेको थिए । बैदेशिक साहयता पनि मेरै पालामा मैले सुरुवात गरेको हुँ,मैले म जिबिस सभापति हुँदा अनगिन्ति कार्य गरेको छु बरु सोध्नुस् २५ बर्ष शासन गरेको कम्युनिष्ठलाई दोलखाको बिकासमा के ग¥यौ ।
१० बर्षे शशस्त्र द्धन्दका ताका परिवारका सदस्य गुमाएका आम दोलखालीलाई के भन्नुहुन्छ ?
हिजो पढ्नुपर्छ भन्दा किताब चात्ने ,बिकास गर्न सडक खन्दा डोजर जलाउनेहरुसँग बिश्वास नगर्नुस् बिकास बिरोधी त छन् नै कम्यनिष्ठले जनता धनी भएको देख्न चाँहादैन । हिजो दुनियाको ज्यान मारेका कम्युनिष्ठहरुसँग आजै बिश्वास गर्ने समयको भएको छैन । निश्चय पनि उहाँहरुको पिडा सम्झँदा मन भक्कानिएर आउँछ् द्धन्दमा ज्यान गुमाउने प्रति मेरो उच्च साहानुभुति छ । यो निर्बाचन बिद्यालयलाई ब्यारेक बनाउनु पर्छ भन्नेहरु र हामी बिद्यालयमा बालबालिका पढाउनु पर्छ भन्ने बिचको पनि हो । कम्युनिष्ठहरुको काम आफु जोगिएर जनता मार्ने नै हो , हिजो त्यसै भयो ,आज कम्युनिष्ठहरु सत्ता प्राप्तीका लागि के गरिरहेका छन्, त्यो त सहिद परिवारले देखिरहनु नै भएको छ , नि ।
द्धन्द तिरका कुरा धेरै नगरु हिजो ज्यान मार्दै आज पार्टीका नाममा मत माग्दै आफ्नो भबिष्य सुरक्षित गरिरहेको उदारण त दोलखामा थुप्रै देखिहालिन्छ नी । हिजो रगतको खोला बगाउनेहरु आज उम्मेद्धार बनेका छन् । सायद उनिहरुलाई पनि त्यो पछुतो लाग्नु पर्ने हो तर कम्युनिष्ठ पार्टीमा त्यसको कुनै लेखाजोखा हुँदैन । नेपाली कांग्रेसले शहिद परिवारको पिडामा मलपट्टि लगाउने छ र लगाउने काम गर्छ । हामी उहाँहरुको साथमा छौं ।
आम दोलखाली र मतदातालाई के भन्नुहुन्छ ?
म बिकास प्रेमी र संर्घषशिल ब्यक्ति हुँ म पनि झ्याँकुको सामान्य परिवारमा हुर्के हुँ । मैले अमेरीकाको बिकासलाई राम्ररी नियालेको छु , म दोलखालीहरु अमेरिका जान लालायित होईन । अमेरीकामा बसेका अमेरीकि नागरिकलाई दोलखा आउन लालायित बनाउन मेरो उम्मेद्धारी हो । म दोलखालाई पर्यटकिय केन्द्रको रुपमा बिकास गर्छु ,हिजो मैले लप्ची, शैलुङ लगायतको बिकास गर्ने अबधारण बनाए । शैलुङ, तामाकोशी, गौरीशंकर, च्छोरोल्पा, कालिन्चोक,जिरी लगायतका दर्जनौं पर्यटकिय क्षेत्रमा जबसम्म आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरु भित्रिदैनन् तब सम्म दोलखाको बिकास सम्भब छैन, जलश्रोतको भरपुर उपयोग गर्छाैं । बिधुत् उत्पादनमा लागिरहेका छौ । दोलखाका कोहि नागरिक अँध्यारोमा बस्नु पर्दैन । २४ बर्ष कम्युनिष्ठहरुले दोलखालाई बिकासको बन्धक बनाए । कमिसनको खेलमा लागे । मलाई कम्युनिष्ठहरुलाई जस्तो बिकास बजेटमा कमिसन खानु छैन । म दोलखाली जनताको पक्षमा काम गर्छु , म दोलखाको बिकासका लागि अहोरात्र लागिरहेकै छु भोली पनि लाग्छु जनताको दुख नै मेरो दुख हो । त्यसैले म दोलखाली नागरिकलाई बिकास गरेर सुखमा राख्ने अठोट गर्छु धेरैपटक कम्युनिष्ठलाई जिताउनु भो ,यो पटक रुख चिन्हमा मतदान गर्न आम दोलखाली मतदाता आमाबुवा दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुले मलाई र कांग्रेस पार्टी बिजय गराउनु हुनेछ ।
6,534 total views, 12 views today